Best Disc brake caliper spare parts Manufacturer and Factory | KTG
Pane zvakawanda zvinotsiva zvikamu zvauchazoda kuti utore mota yako mumakore apfuura, uye brake calipers zvirokwazvo imwe yacho. Pasina brake caliper, ipapo, hapana motokari yaizokwanisa kumira. KTG inotarisa pakugadzira mabhureki zvikamu zveiyo aftermarket. Zvose KTG Aftermarket Brake Caliper enderera mberi nekuita uye kutsanangurwa kweiyo yekutanga OE chikamu.
Ziva Zvakawanda Nezve KTG Brake caliper spare parts.
KTG AUTO haingopi caliper chete asi inouyawo nekugadzirisa kits, kune akawanda ma spare parts: caliper piston, actuator, caliper mounting bracket, brake rubber bushing, caliper mounting bolt kit, caliper pad clip kit, brake caliper repair kit. Tine nhamba dzinopfuura zviuru zvitatu dzeOE dze aftermarket brake caliper uye brake caliper parts. Kune chero kubvunza chaiko pane brake caliper kana kabhuku, batasales@ktg-auto.com nemashoko.
Brake Caliper Kukwidza Bolt Kit
Brake Caliper Repair Kit Functions
Brake caliper kugadzirisa kits inodzivirira kubuda kwemvura inoshanda uye kuve nechokwadi chekufamba kwemahara kwezvinhu zvinofamba. Pistons anoshandiswa kuendesa zvakananga braking force kune mabhureki pads. Kuvhara mhete kunodzivirira kubuda kwemvura kubva pakati pepiston necylinder. Mashizha egwara anovimbisa kufamba kwecaliper uye brake pads. Dust boots inodzivirira magungano kubva kune tsvina uye unyoro, uye inoshandawo kuchengetedza girizi. Kubata-pasi zvitubu zvinova nechokwadi chekwakakodzera mabhureki pads chinzvimbo uye kudzivirira kutinhira kwavo vachityaira. Kushumira uye kugadzika kwezvinhu zvebrake caliper zvinoda maagent anokosha ayo, sekutonga, anosanganisirwa mukugadzirisa kit.
Kushandiswa Kwekugadzirisa Kit
Kazhinji, kukanganisa kwebrake caliper kunokonzerwa nekuputika kwezvinhu zvayo zvinofamba - mapini ekutungamira uye piston. Pane zvikonzero zvakawanda zvekukanganisa kwezvinhu izvi. Zvikuru zvadzo ndezvi:
1. Hupfu bhutsu dzinobvaruka. Nekuda kwekukuvara kwekusavimbika kwavo, iyo brake caliper inofamba zvinhu zvinoratidzwa kune hunyoro, tsvina, uye makemikari anonyungudika. Pakupedzisira, izvi zvinoguma nekuora uye jamming yezvikamu.
2. Kushandiswa kwegirisi isina kukodzera. Usashandise lithium kana graphite lubricant kushandira mapini ekutungamira. Zvisungo zvavo zvine zvinokanganisa zvinhu zverubha. Vanorasikirwa nekusimba, kuzvimba uye kuvharidzira kutsvedza kwemahara kwemapini ekutungamira.
3. Kunonoka kuchinja mabhureki fluid. Nekuda kwehuwandu hwayo hwekutora mvura, huwandu hwemvura mukuumbwa kwayo hunokwira nekufamba kwenguva. Izvi zvinokurudzira kuora kwemukati kwepistoni. Kuchengetedza kwemotokari kwenguva refu dzimwe nguva kunoguma nemhedzisiro yakafanana.
Iko kushanda kwebhureki system kunoenderana zvakananga nemamiriro eiyo gwara mapini uye piston. Nokudaro, kana pane kukanganisa, gadzirisa brake caliper pakarepo. Kutenga yakakodzera kugadzirisa kit ndiyo inonyanya kubatsira mhinduro. Inosanganisira zvese zvaunoda kudzorera gungano, izvo zvinokuchengetera mari nenguva.
Zvakapfuura: Rear disc brake caliper passenger side yeTOYOTA COROLLA/MATRIX PONTIAC VIBE
Zvinotevera: Electric Parking Brake
Rear disc brake caliper pa...